शारीरिक सम्बन्ध राख्न अघि गर्नै नहुने ५ काम, जस्ले असर गर्छ | onlineharpal.com
बेलायतमा नेपालि म्युजिकल फेस्टिबल यु के २०१९, अप्रिल १३मा भव्यताकासाथ् सम्पन्न हुने
निरंजली एक पछि अर्को गर्दै सफलताको खुट्किला चड्दै
पप गायिका स्मृति पोखरेलले पत्रकारसंग यसरि गरिन ठट्टै ठट्टा
सावित्री सुबेदीले यस कारण छोडेकी रहेछिन न्यायधिस पत्नी ललितालाई
अशोक दर्जीको नयाँ गीत ‘चौरीको चाम्रो छुर्पी’ छायांकन सकियो
शारीरिक सम्बन्ध राख्न अघि गर्नै नहुने ५ काम, जस्ले असर गर्छ
on: ६ कार्तिक २०७३, शनिबार १५:४४ In: समाज
यौन मानिसको एउटा अनिवार्य शारीरिक आवश्यकता हो । यो आवश्यकतालाई पूरा गर्दा वा यसलाई व्यवस्थापन गर्दा हामीले निकै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा सानो सावधानी अपनाउँदा ठूलो समस्याबाट जोगिन सकिन्छ । सामान्य लाग्ने लापरवाहीले पनि हाम्रो शरीरमा गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्दछ । त्यसकारण यौन सम्पर्क गर्नुपूर्व यी काम भुलेर पनि गर्नुहुँदैन-
मुत्रनलीमा हुने संक्रमण वा घाउको मुख्य कारण यौन सम्पर्क गर्नुअगाडि पिसाब फेर्नु भएको कुरा वैज्ञानिकले पत्ता लगाएका छन् । यसको वैज्ञानिक कारण छ । यौन सम्पर्कका क्रममा हाम्रो मुत्रनलीमा विभिन्न व्याक्टेरिया उत्पन्न हुने गर्दछन् । यस्ता व्याक्टेरियाका कारण मुत्रनलीमा संक्रमण वा घाउ हुने गर्दछ । तर यौन सम्पर्क गर्नुअघि पिसाब फेरियो भने यौन सम्पर्कपछि पिसाब फेरिदैन । जसका कारण मुत्रनलीमा जम्मा भएका व्याक्टेरिया त्यहीँ रहन्छन् । यसकारण पनि यौन सम्पर्क गरेपछि मात्रै पिसाब फेर्दा राम्रो मानिन्छ जसले गर्दा मुत्रनलीमा भएका व्याक्टेरिया पिसाबसँगै बाहिर निस्कछन् ।
२. कडाखालको औषधी खानुहुँदैन
यौन सम्पर्क गर्नुअगाडि कडाखालमा औषधी प्रयोग गर्नुहुदैन । कडा औषधी प्रयोग गरेपछि औषधीका कारण हाम्रो शरीरका धेरै नलीहरु सुख्खा हुनेगर्दछन् । जसले गर्दा हाम्रो यौनाङ्गमा भएका नलीपनि सुख्खा हुनजान्छन् । विशेषगरी एलर्जीका लागि प्रयोग गरिने एन्टीहिस्टामिन भन्ने औषधी प्रयोग गर्नु निकै हानिकारक मानिन्छ । अझ महिलाले यो औषधी प्रयोग गर्ने हो भने योनी सुख्खा हुने गर्दछ । जसले गर्दा एकातिर यौनानन्द प्राप्त गर्न सकिन्न भने अर्कोतिर यसले लिङ्गमा पनि नकरात्मक असर पार्दछ । त्यसैले कुनै पनि औषधी खाएर यौन सम्पर्क नगर्दा नै राम्रो मानिन्छ ।
३. रक्सी खानुहुदैन
प्रायः मानिसहरु रक्सी खाएर यौन सम्पर्क गर्दा आफूले पूर्ण सन्तुष्टि पाउने बताउँछन् । रक्सी खाएपछि लाजपनि हट्ने र यौन क्रियाकलाप रमाइलो हुने कतिको विश्वास रहेको छ । यसमा केही सत्यता पनि छ । तर रक्सी खाएर यौन सम्पर्क गर्दा हाम्रो शरीरमा यसले कस्तो असर पार्दछ भन्ने कमैलाई थाहा हुन्छ । रक्सी खाएको बेला शरीरका नशा निकै तात्ने र तन्किने गर्दछन् । जसले गर्दा हाम्रो शरीरको शक्ति अनावश्यक रुपमा नष्ट भइरहेको हुन्छ । साथै यसले शरीरको प्राकृतिक प्रणालीमा समेत नकरात्मक असर पारिरहेको हुन्छ ।
अब यस्तो बेलामा यौन क्रियाकलाम गर्दा के होला भनेर एकपट सोच्नुस् त । एकातिर रक्सीका कारण र अर्कोतिर यौन क्रियाकलापका कारण हाम्रो शरीर तात्दा यसको असरलाई सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसैले रक्सी खाएर यौन सम्पर्क गर्नु निकै हानिकारक मानिन्छ ।
४. गलत आकारको कन्डम प्रयोग गर्नुहुँदैन
सुरक्षित यौन सम्पर्कका लागि कन्डम प्रयोग गर्नु निकै राम्रो कुरा हो । तर लिङ्गको आकारसँग मेल खाने कन्डम प्रयोग गरिएन भने यसले समस्या समस्या पनि निम्त्याउन सक्दछ । यदि लिङ्गभन्दा ठूलो साइजको कन्डम प्रयोग गरियो भने योनीभित्र कन्डम फस्ने संभावना हुन्छ भने सानो साइजको कन्डम प्रयोग गर्दा फुट्ने संभावना हुन्छ । त्यसकारण लिङ्गको आकार औसत(५.१ इन्च) भएमा सानो आकारको कन्डम(१.७५ इन्च चौडाइ र ६.३ इन्च लम्बाइ भएको) प्रयोग गर्नुपर्दछ । तर लिङ्गको आकार ठूलो भएमा भने ठूलो आकारको कन्डम प्रयोगमा ल्याउनुपर्दछ ।
५. सेभिङ गर्नुहुदैन
कैयौं मानिसले यौनाङ्ग सेभिङ (रौं खौरने काम) गरेर यौन सम्पर्क राख्न मन पराउँछन् । तर सेभिङ गर्ने बित्तिकै यौन सम्पर्क गर्दा एसटिआई (सेक्सुअल्ली ट्रान्समिटेड डिजिज) हुने संभावना बढी रहने डाक्टरहरु बताउँछन् । सेभिङ गर्दा औजारले चिथरेको वा काटेको ठाउँमा संक्रमण हुनसक्दछ भने व्याक्टेरियाको संक्रमण हुने खतरा पनि हुन्छ । यसकारण यौन सम्पर्क गर्नुअघि कि सेभिङ नै नगर्ने वा सेभिङ गरेको केही समयपछि मात्रै यौन सम्पर्क गर्नु राम्रो मानिन्छ ।
महिलाको स्तनको बारेमा ११ अनौठो आश्चर्य जनक तथ्यहरु
२३ मंसिर २०७५, आईतवार २३:१०
बखत बिष्टसंग आफ्नो नाम जोड्दा सारै चित्त दुखाइन मुना मगरले
१२ मंसिर २०७५, बुधबार ०९:३७
भुईकटहरकाे जग्गा पासमा बिवाद ,संयाेजकलाई आर्थिक पारदर्सीतामा ठूलाे प्रश्न
१० कार्तिक २०७५, शनिबार १४:२५
GENS UK को भ्रमण सम्पन्न, संस्थाले छिट्टै इ कमर्स साइट बजारमा ल्याउने |
१६ असार २०७५, शनिबार ०३:१९
३३ केजी सुन प्रकरणमा पूर्व एमालेका स्थानीय नेता समेत पक्राउ
११ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार ०८:१२
भक्तपुरमा मानब कल्याण समाजद्वारा सडक मानिसहरुको उद्दार गरिदै
१० जेष्ठ २०७५, बिहीबार १४:२७
१६ बर्षीय किसोरिको बलात्कार पछी जलाएर हत्या
२९ बैशाख २०७५, शनिबार १३:२३
धर्मगुरुको ठुलो सड्यन्त्र यसरी भयो पर्दाफास, उनको योजना नांगियो
२५ बैशाख २०७५, मंगलवार ०८:५०
२७ मंसिर २०७५, बिहीबार ०५:२७
२६ मंसिर २०७५, बुधबार ०९:४६
२५ मंसिर २०७५, मंगलवार ००:१५
२२ मंसिर २०७५, शनिबार २३:५४
मेलिना राइ र दर्पण राइको ‘तिम्ले बाटो फेरेउअरे’ भाग २ सार्वजनिक
२१ मंसिर २०७५, शुक्रबार ०९:३९